Vondrona mitaky ny hamotsorana ireo mpikatroky ny Mother Nature mpiaro ny tontolo iainana · Global Voices teny Malagasy
Tanora mpikatroka voasambotra fa naka sary rano maloto mikoriana eo akaikin'ny Lapam-panjakana.
Voadika ny 13 Avrily 2022 12:23 GMT
Sary iray nozaraina teo amin'ny media sosialy miantso ny famotsorana ireo mpikambana avy amin'ny Mother Nature. Loharano: Facebook
Takian'ireo mpiaro ny zon'olombelona ao anatiny sy ivelan'i Kambodza ny hamotsorana tsy misy hatak'andro ireo mpikatroka mafàna fo avy amin'ny Mother Nature, izay nofonjaina noho ny fakàna sary ny rano maloto iray mikoriana eo akaikin'ny Lapan'ny Mpanjaka.
Mpikambana ao amin'ny Mother Nature i Sun Ratha, 26 taona, sy Yim Leanghy, 32 taona, izay nosamborina tamin'ny 16 Jona raha iny teo ampiraketana ny fikorianan'ny rano maloto tao amin'ny reniranon'i Tonle Sap iny. Voasambotra tao amin'ny faritanin'i Kandal i Ly Chandaravuth, 22 taona, mpiara-miasa amin'izy ireo. Nampangaina ho nikononkonona fanafihana Fanjakana sy naniratsira ny mpanjaka izy ireo. Voampanga na tsy niseho tamin'ny fitsarana aza ny mpamorona ilay vondrona, Alejandro Gonzalez-Davidson, teratany Espaniôla.
Tsy vao voalohany izao ireo mpikambana ao amin'ny Mother Nature no niatrika fanenjehana ara-pitsarana noho ny fisoloana vava ataony. Nosamborin'ireo tomponandraikitra i Phoun Keo Reaksmey, 19 taona, Thun Ratha, 29 taona, ary i Long Kunthea, 22 taona, tamin'ny volana Septambra 2020 noho ny nanomanany diabe iray ho any amin'ny lapan'ny Praiminisitra, ampahany amin'ny fanentanana iray hanoherana ny vinavina iray hanomezana ho an'ny tsy miankina sy fanavaozana kasaina atao amin'ny farihin'i Tamok ao Phnom Penh, renivohitr'i Kambodza. Voaheloka tamin'ny volana May izy telo ireo.
Fantatra amin'ireo fikarakarana fanentanana anaty media sosialy sy ireo drafitr'asa an'ny vondrompiarahamonina ny Mother Nature, mba hanasongadinana reo olana ara-tontolo iainana. Tamin'ny taona 2015, nitarika fanentanana iray izy izay nahavitàny nanakàna ny fananganana tohodrano gaovambe iray tao amin'ny lohasahan'i Areng somary lavidavitra. Izy ihany koa no nampibaribary ireo asa fanondranana an-tsokosoko ny fasika tany amin'ireo faritra amorontsiraky ny firenena. Niafara tamin'ny fandroahana an'i Gonzalez-Davidson ireny fanentanana ireny.
Niteny teo amin'ny Radio Free Asia i Gonzalez-Davidson fa ireo fisamborana vao haingana nikendrena ny Mother Nature dia mety hanome vahana ireo tomponandraikitra tafiditra amina hetsika fandraharahàna maninba ny tontolo iainana :
Na izany fikapàna ireo hazo ao amin'ny alan'i Prey Lang, fikapàna tsy ara-dalàna ny andramena ao anatin'ny tandavan-tendrombohitr'i Kravanh, fandoarana ny fasika manaraka ny reniranon'i Mekong na ao Koh Kong, na fitrandrahana volamena ao anatin'ny faritanin'i Preah Vihear na i Mondulkiri, ho mora ho azy ireo ny manao ireo rehetra ireo ankehitriny.
Hahazo tombony amin'ireny fisamborana ireny ireo orinasa sy ireo olon-tsotra voarohirohy amin'ny fandraharahàna tsy ara-dalàna.
Fa nohitrikitrihan’ny Minisitry ny Atitany ny hoe nampiasain'ny Mother Nature fotsiny ny olana ara-tontolo iainana mba hanafenana ny tena tanjony amin'ny firaisana tsikombakomba hanozongozonana ny governemanta.
Io asa io dia tetika iray hanentanana, handrehetana ny fizarazaràn'ny firenena, ary nanosihosy ny Lalàm-panorenana Kambodziana [izy] ka tanjona amin'izany ny tsy hampisy fandriam-pahalemana ara-tsosialy sy hisy fiantraikany amin'ny fitoniana nasionaly ka tsy maintsy nandraisan'ireo manampahefana mahefa fepetra araka ny lalàna.
Nanameloka ireo fisamborana sy fametrahana fitoriana an'ireo tanora mpikambana avy ao amin'ny Other Nature ireo vondrona Kambodziana mpiaro ny zon'olombelona. Nanambara i Sopheap Chak ao amin'ny Ivontoerana Kambodziana misahana ny zon'olombelona fa tokony ho raisin'ireo tomponandraikitra amp-pifaliana ny asan'ny Mother Nature :
Tokony ho deraina ny asa nataon'ireo mpikatroka mafàna fo fa tsy ho hosakanana”, ary tokony ho henoina ny feon'izy ireo fa tsy hampanginina.
Taorian'ny filambaniny ara-pitsarana izay natrehan'ireo mpikambana maro avy ao amin'ny vondrona mpiaro ny tontolo iainana, Mother Nature Camboia, angatahan'ny CCHR ny fanafahana tsy misy hatak'andro ireo mpikatroka mafàna fo ara-tontolo iainana voafonja noho ny fahavitrihan'izy ireo sy ny fanesirana ny sazy nomena azy ireo. #Cambodia pic.twitter.com/T2PRybbe5p
— CCHR Cambodia (@cchrcambodia) 28 Jona 2021
Niara-nanao sonia fanambaràna iray niraisana ireo fiarahamonina sivily nanehoany ny ahiahin'izy ireo mikasika ireo fisamborana :
Tsy heloka bevava velively ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny fitakiana amin'ireo tomponandraikitra mba hiaro ny tontolo iainana, ary loza mitatao ho antsika rehetra ny famonjàna an'ireo taranaka ho mpiaro ny tontolo iainana amin'ny hoavy eto amin'ny firenena.
Niantso ny fitsarana ihany koa izy ireo noho ny fiampangàna ireo mpikatroka sy noho ny fametrahana ireo mpanohitra am-pilaminana any anatin'ireo fonja be olona loatra mandritra ny valanaretina iray:
Miseho ho tsy taitra ny fitsaràna amin'ny famotsorana mialoha na amin'ny fampandoavana onitra ireo olona voaheloka noho ny heloka tsy nisy herisetra, fa ny ataony dia manohy managadra ireo mpikatroka am-pilaminana, mametraka ny fahasalaman'izy ireo ho tandindomin-doza.
Namoaka fanambaràna iray manainga ireo manampahefana ny Fandaharanasan'ny Firenena Mikambana misahana ny Zon'Olombelona sy ny misahana ny Tontolo Iainana, mba hampitsahatra ny fanasaziana an'ireo tsikera sy ireo mpikatroka. Nanampy koa i Cynthia Veliko, solontenan'ny Fandaharanasan'ny Firenena Mikambana misahana ny Zon'Olombelona, birao misahana ny faritra Azia Atsimo-Atsinanana ao Bangkok, hoe :
Tsy maintsy atao ny mampitsahatra ny fampiasana ireo fepetra rehetra famaizana atao matetika amin'ireo mpiaro ny zon'olombelona sy nyny tontolo iainana ao Kambodza. Tsy fandikan-dalàna famaizana ny asa atao ho an'ny zon'olombelona sy ny tontolo iainana.
Manainga ireo tomponandraikitra izahay mba hiantoka fa ho afaka miasa tsy amin-tahotra na ambany fandrahonana ireo fikambanan'ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny fiarahamonina sivily ao Kambodza, ary ho voaaro sy voahaja ny zon'izy ireny haneho hevitra an-kalalahana, ny fahafahana mivory am-pilaminana sy manorina fikambanana.
Hatreto, tsy nampiseho porofo mihitsy ireo manmpahefana ho entna manazava ny antony maha-heloka bevava ny asa fandraketana tsotra iray natao momba ny fikorinan'ny rano maloto iray mankao anaty renirano iray. Vohikala mpilaza vaovao iray an-tserasera, mpomba ny governemanta, no nandefa lahatsary iray izay toa fivoriana manokana tao amin'ny Zoom nataon'ireo mpikambana avy amin'ny Mother Nature, niresahana mikasika ny politikan'ny firenena.
Ny Amnesty International dia nametra-panontaniana momba ireo hetsika fanarahamaso tsy ara-dalàna natao tamin'ireo vondrona manohana ny fanavaozana sy ny fitondrana tsara tantana :
Manaitra fa toa sahala amin'ny mirona mankany amin'ny fanaraha-maso tsy ara-dalàna an'ireo mpikatroka ho an'ny tontolo iainana ireo manampahefana, mba hiketrehana porofo fisiana firaisana tsikombakomba hafahafa. Imbetsaka, ny governemanta Kambodziana no namaritra ireo mpanao tsikera ny governemanta ho mpikomy sy mpiray tetika ary nandoko ny fikatrohana am-pilaminana ho sahala amin'ny heloka bevava.
Sebastian Strangio avy amin'ny The Diplomat nanoratra mikasika ny fanapahan-kevitra manondratsondrana an'ny Cambodian People's Party (CPP), izay mampitovy, amin'ny fomba manala-baraka, ny hetsika am-pilaminana amin'ny famadihana tanindrazana sy fanakorontanana ara-politika :
Saingy, ny tahotra masom-bahoaka fotsiny dia tsy ampy hanazavana ny habetsahan'ireo fiampangàna natao tamin'ireo telo mpiaro ny tontolo iainana avy amin'ny Mother Nature, sy ny di-doha ratsin'ny governemanta amin'ny fihazàna ireo hetsika ataon'ilay vondrona. Izany dia taratry ny aretin-tsaina lalina ananan'ny governemantan'ny CCP manoloana ny dindo avy any ivelany, sy ny fironan'izy ireo amin'ny fampifangaroana ny fikatrohan'ny fiarahamonina sivily mahaleotena amin'ny olana rehetra amin'ireo fikasana hanongana ny governemanta amperin'asa.
Raha toa voamarina fa meloka izy ireo, mety higadra dimy hatramin'ny folo taona ireo mpikambana voasambotra avy amin'ny Mother Nature.